*𝐍𝐌𝐃𝐂 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦* – NMDC
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on *𝐍𝐌𝐃𝐂 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦*
NMDCSU ကနေပြီးတော့ ဦးဆောင်ကျင်းပသွားမယ့် NMDC ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Virtual Student Forum နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ NMDC ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံး ပါဝင်လို့ရမယ့် Online Event ကြီးဖြစ်တဲ့ အပြင် NMDCSU အတွက်လဲ မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
ဒီ Forum ကိုတော့ “Redefining Career Aspirations for Post-COVID Myanmar” ဆိုတဲ့ Theme ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ Digital Tools တွေနဲ့ ပိုမို ရင်းနှီးလာမယ့် အပြင် Covid-19 ကပ်ကြောင့် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေတွေနဲ့ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထားသင့်ပုံကို လေ့လာ ဆွေးနွေးနိုင်မှာပါ။
လာမယ့် ဇွန်လ ၂၆, ၂၇, ၂၈ သုံးရက်တိုင်တိုင် ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Day 1 နဲ့ Day2မှာတော့ Keynote Speech တွေနဲ့ Panel Discussion ကို NMDCSU Facebook Page မှတစ်ဆင့် Live ထုတ်လွှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Day3မှာတော့ ZOOM Platform ကို အသုံးပြုပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသားများ ပါဝင်ဆွေးနွေးရမယ့် Breakout Sessions ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတူညီတဲ့ “ခေါင်းစဉ်လေးခုနဲ့ Workshop လေးခု” တစ်ပြိုင်နက်ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Workshop နှစ်ခု (မနက်တစ်ခု၊ ညနေတစ်ခု) တက်ရောက်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Workshop တစ်ခုကို အယောက် ၅၀ နှုန်းနဲ့ စုစုပေါင်း အယောက် (၂၀၀) ပါဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Certificate လဲ ပေးအပ်သွားမှာပါ။ Breakout Sessions အတွက် Registration ကို မကြာခင်မှာ လက်ခံသွားမှာပါ။
Covid-19 ကာလ တက္ကသိုလ်တွေ ပိတ်ထားရချိန်မှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အပြင်I industry မျိုးစုံက လုပ်ငန်းရှင်/ပညာရှင်တွေ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်လို့ ရှု​ဒေါင့်မျိုးစုံက အတွေးအမြင်အစုံ ရရှိစေမှာပါ။
NMDC ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Virtual Student Forum ကြီးမှာ ဆုံကြမယ်နော်။
NMDC Virtual Student Forum အတွက် အားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီဆိုတော့ ပထမရက်ဖြစ်တဲ့ Opening နဲ့ Keynote Speeches Session အကြောင်း ပြောပါပေးချင်ပါတယ်။
Day 1 မှာတော့ “The New Normal: Transforming Businesses Digitally & the Rise of Intelligent Enterprises” နဲ့ “Career Readiness in the Digital World” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ Keynote Speech Session နှစ်ခုပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ Guest Speaker နှစ်ယောက်ကတော့ Dr. Tun Thura Thet နဲ့ Ma Yee Mon Kyaw တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
NMDCSU Facebook Page ကနေ ည ၆ နာရီနဲ့ ၇ နာရီခွဲအချိန်မှာ Live ထုတ်လွှင့်သွားမှာ ဖြစ်လို့ NMDCer တွေသာ မက အားလုံး ကြည့်ရှုနိုင်မိုလို့ လက်လွတ်မခံဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ သိချင်တာလေးတွေ မေးနိုင်တဲ့ Q&A session လဲ ပါအုံးမှာပါ။
အစီအစဉ်အသေးစိတ်နဲ့ Speakers တွေရဲ့ Profile တွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Keynote Speech 1: The New Normal: Transforming Businesses Digitally & the Rise of Intelligent Enterprises
Myanmar Information Technology Pte Ltd (MIT) ရဲ့ Founder & Chairman ဖြစ်တဲ့ Dr. Tun Thura Thet ဟာ Yangon University of Economics (YUEco) မှ MBA ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး Nayang Technological University, Singapore မှ MSc.(Information Studies) နှင့် PhD ရရှိထားကာ
YUeco တွင် နှင့် UCSY တွင် သင်ကြားပေးနေတဲ့ Visiting Lecturer တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် Myanmar Computer Professionals Association (MCPA), Myanmar Computer Industry Association (MCIA) နဲ့ Myanmar Computer Enthusiast Association (MCEA) စတဲ့ federation‌တွေမှာလည်း Vice President အ‌နေနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ Digital Economy Development Committee (DEDC), SME Development Committee, E-government Research and Development Committee တို့ရဲ့အဖွဲ့၀င်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Ma Yee Mon Kyaw
Keynote Speech 2: Career Readiness in the Digital World
7:30 P.M. – 8:30 P.M.မရည်မွန်ကျော်ဟာ HR နယ်ပယ်ဘက်မှာ Professional ကျကျလုပ်ကိုင်နေပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ AIA Myanmar ရဲ့ HR Practitioner တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Dale Carnegie Myanmarရဲ့ Trainer တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မရည်မွန်ကျော်က Organisation တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ အတွက် HR Strategy တွေချ‌တဲ့နေရာမှာ အစွမ်းဆရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ Digicel, Ooredoo, Coca Cola , Alibaba စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ
Leadership ပိုင်းကနေ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ HR Specialist တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
NMDUSU က ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ NMDC Virtual Student Forum ရဲ့ ဒုတိယရက်ဖြစ်တဲ့ Panel Discussion အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
Day2မှာတော့ မတူညီတဲ့ Industry4ခုဖြစ်တဲ့ IT, FMCG , Tourism နဲ့ Journalism Industry တို့မှ Industry-best များဖြစ်တဲ့ Ma Aye Mya Thidar, U Aung Aung , Ko Wanna Kyaw နဲ့ U Kyaw Min Htin တို့မှ “Redefining Career Aspirations for Post-COVID Myanmar” ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Panelists အားလုံးကတော့ မိမိသက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားကာ လေးစားအတုယူရလောက်တဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ်များပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
NMDCSU Facebook Page ကနေ ည ၃နာရီနဲ့ ၄နာရီခွဲအချိန်မှာ Live ထုတ်လွှင့်သွားမှာ ဖြစ်လို့ NMDCer တွေသာ မက အားလုံး ကြည့်ရှုနိုင်မိုလို့ လက်လွတ်မခံဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ သိချင်တာလေးတွေ မေးနိုင်တဲ့ Q&A session လဲ ပါအုံးမှာပါ။
အစီအစဉ်အသေးစိတ်နဲ့ Panelists တွေရဲ့ Profile တွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Daw Aye Mya Thida
Panelist 1 : Redefining Career Aspirations for Post-COVID Myanmar
Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Limited ရဲ့ HR Director အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ ​Daw Aye Mya Thida ဟာ East Yangon University ​မှ Bachelor Degree of Science in Mathematics ရရှိခဲ့ပြီး​တော့ ထိုင်းနိုင်​ငံ Assumption တက္ကသိုလ်​မှ Master of Business Administration ကိုလည်း ရရှိထားသူဖြစ်​ပါတယ်​။
​​Daw Aye Mya Thida ဟာဆိုရင်​ ​ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်​​ငွေ့၊ FMCG နဲ့ ဆက်​သွယ်​​ရေးလုပ်​ငန်းတွေ အပါအဝင်​ အခြား​မတူညီတဲ့ စက်​မွုလုပ်​ငန်းများစွာရဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်​နယ်​ပယ်​မှာ အ​တွေ့အကြုံအားဖြင့် (၁၇)နှစ်​ရှိပြီးသူ တစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ပါတယ်​။
သူမဟာ PETRONAS Carigali (Hong Kong) Myanmar Limited မှာ HR Executive အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Limited မှာ Organization Development and Learning Manager အဖြစ်​ လည်းကောင်း​ ၊ Telenor Myanmar၏ Senior Vice President (Head of Talent & OD) အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နောက်​ပိုင်​းမှာ​တော့ Head of HR Centre of Expertise အဖြစ် Telenor Myanmar ရဲ့ People Group မှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ယခုအချိန်မှာတော့ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Limitedရဲ့ HR ဒါရိုက်တာအဖြစ် စတင်​ဦး​ဆောင်​ခဲ့ပါတယ်​။
သူမဟာဆိုရင်​ Talent Management, Learning & Development, Rewards and Organizational Design, People Engagement, Employee Relation, Compliance Management, Employee Wellbeing and Culture Transformation စတဲ့ Talent နဲ့ Skills များစွာပိုင်ဆိုင်ထားပြီး​ နည်းပြပိုင်း ၊ လူ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်​မှုဆိုင်​ရာနဲ့ အသင်းအဖွဲ့ ပူး​ပေါင်းဆက်​ဆံ​ရေး​တွေမှာ စိတ်​အားထက်​သန်စွာ အလုပ်​လုပ်​ကိုင်​တတ်​တဲ့ သူတစ်​ဦးလည်း ဖြစ်​ပါတယ်​။
U Aung Aung
Panelist2: Redefining Career Aspirations for Post-COVID Myanmar
Ahtar Oo Co., Ltd. ရဲ့ Founder & Managing Director ဖြစ်တဲ့ U Aung Aung နဲ့ ထပ်မံ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ ဦးအောင်အောင်ဟာ Myanmar Computer Professionals Association ရဲ့ Executive အပြင် Myanmar Citizen Bank Ltd ရဲ့ Director အဖြစ်လည်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ် ။
နည်းပညာဆိုင်ရာပညာပြန့်ပွားရေးအတွက် တက္ကသိုလ်များနှင့် အထက်တန်းကျောင်း​တွေမှာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့် ဟောပြောပွဲ​တွေဖြစ်​တဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းမှု အကြောင်းအရာ​တွေကို အဓိကထားပြီး လုပ်အားပေးအဖြစ် ဟောပြောလျှက် ရှိပါတယ်​။ ဗိုလ်တထောင်ရှိ National Management Degree College မှာလည်း Corporate Social Responsibility (CSR) ဘာသာရပ်ကို Visiting Lecturer အဖြစ် သင်ကြားပို့ချလျှက်​ရှိပါတယ်။
Ko Wanna Kyaw
Panelist 3: Redefining Career Aspirations for Post-COVID Myanmar
Ko Wanna Kyaw ဟာ စီးပွားရေးကြော်ငြာဒါရိုက်တာ/ ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် မီဒီယာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ​တွေကို လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်​။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ Sony Alpha ကင်မရာများ၏ Videography Category ရဲ့ Brand Ambassador ဖြစ်တဲ့ Ko Wanna Kyaw ဟာဆိုရင်ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာနှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ “Miracle Post Media Production & Event Management” ကိုလဲ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါတယ်​။ Kyaw Aaron Co.,Ltd. , Kyaw Aaron Film Productions & WTS Brand Communication Agency တို့ရဲ့ Managing Director အဖြစ်လည်း လုပ်ကိုင်နေပါတယ်
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း​တွေမှာ Visiting Lecturer အဖြစ် အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတများကိုလည်း ဝေမျှပေးလျက်ရှိပါတယ်​။ ကိုဝဏ္ဏကျော်ဟာ BBC, CNA, AFP, JICA, ADB, Asia INC Forums, World Vision, Save The Children, Gothe Institute စ​​သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အေဂျင်စီ​တွေနဲ့လည်း တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်​။
U Kyaw Min Htin
Panelist4: Redefining Career Aspirations for Post-COVID Myanmar
U Kyaw Min Htin ​သည်​ ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​မှ နိုင်​ငံတကာဆက်​ဆံ​ရေး ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပြီး ဂျပန်​နိုင်​ငံ တိုကျိုမြို့ရှိ HITOTSUBASHI တက္ကသိုလ်​မှ M.B.A ဘွဲ့ကို ဆက်​လက်​ရရှိခဲ့ပါတယ်​။
U Kyaw Min Htin ဟာဆိုရင်ဖြင့် Chairman of Myanmar Polestar DMC & MICE Management Co.,Ltd. ၊ President of JTB Polestar Co., Ltd. ၊ Managing Director of Jewel Palace Trading Co ., Ltd. ၊ Executive Director of Better Life Education & Career Supporting Center တို့အပြင် Director of Polestar Service Co., Ltd. အဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ Industry-Best တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
U Kyaw Min Htin သည်​ ပြည်​​ထောင်​စုသမ္မတမြန်​မာနိုင်​ငံ​တော်​ ခရီးသွားလာ​ရေးအဖွဲ့(UMTA)၏ Vice President ဖြစ်​ပါတယ်​။ မြန်​မာ့ခရီးသွား​စျေးကွက်​ရှာ​ဖွေ​ရေး(MTM)တွင်​ Executive Committee Member တစ်ယောက်လည်းဖြစ်​ပါတယ်​။ မြန်​မာနိုင်​ငံ ခရီးသွားလုပ်​ငန်​းအဖွဲ့ချုပ်​(MTF)တွင်​ Junior Secretary General အဖြစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် National Management Degree College မှာ Visiting Professor အဖြစ် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို​ သင်​ကြား​ပေးလျက်​ရှိပါတယ်​။
#NMDC #NMDCSU #Virtual_Student_Forum
#CareerAspirations #Covid19 #PostCovid #Workshop